Kitam-pahitana Antibody, akanjo mitokana, Saron-tava fitsaboana- Hemeikaineng
Fanamarinana CE, fanamarinana FDA, fanamarinana ROHS, fanamarinana GOST, fanamarinana REACH, fanamarinana MSDS, fanamarinana TUV, sns.
Fiarovana amin'ny maso miaro amin'ny maso miaro amin'ny zavona ...
Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd. dia orinasa sinoa iray izay miahy ny fahasalamana sy ny fiarovana ny besinimaro sy ny olombelona rehetra. Niorina tamin'ny 2013 izahay ary manana foibe any Chengdu, Sichuan. Izy io dia tena mamatsy vokatra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana isan-karazany toy ny vatsy fisorohana valanaretina, fitaovana famonoana otrikaretina…
Tsy mitovy ny fitondran-tenan'ny olona aorian'ny voan'ny virus coronavirus vaovao: Ny sasany dia voan'ny asymptomatika. Tsy manana fahasahiranana miharihary izy ireo, ary nahita fa tsara rehefa nanao fitsapana asidra niokleika izy ireo. Ny sasany dia marary malefaka. Amin'ny voalohany dia mahatsapa tenda ...
Akanjo fiarovana azo araraotina novokarin'i Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd., mpanamboatra akanjo fiarovana azo arahana fanafody, famokarana lehibe, fandefasana haingana! Vita ny taratasy fanamarinana, ny mari-pahaizana EU CE ...